Jereo Ny Tantara Fohy Iray Momba Ireo Horonantsary Mampiravahontsana Ao Japàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2017 1:54 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, नेपाली, русский, Español, عربي, čeština , বাংলা, Aymara, English
Sary avy amin'ny Onibaba, horonatsary iray mampihoronkoditra tamin'ny 1964. Pikantsary nalaina tamin'ny Youtube .
(Fanamarihana: Raha tsy misy filazana mifanohitra, mitondra mankaminà lahatsoratra miteny anglisy ireo rohy ato )
Raha liana amin'ireo horonantsary Japoney mampihoronkoditra ianao, natao ho anao ny lahatsary fohy maharitra 15 minitra miendrika fanadihadiana ao amin'ny fantsona YouTube One Hundred Years of Cinema (Zato taonan'ny Sarimihetsika).
Anaovan'ny “Tantara Fohy Iray Momba Ny Horohoro Japoney” topimaso ny toeran'ny horohoro ao anatin'ny kolontsaina Japoney, miainga avy amin'ny fàkan'ny miralenta any anatin'ireo tantara malaza sy ireo seho an-tsehatra Kabuki nitety vanimpotoana.
Maharakotra ireo sarimihetsika Japoney maro mampivarahontsana ilay lahatsary, isan'ireny ny “Kaidan” sy “Onibaba”, miainga avy amin'ny taona volamenan'ny sarimihetsika tao Japàna tany amin'ny andian-taona 1950s sy 1960s ka hatramin'ireo sarimihetsika manamarika kokoa ny vanimpotoana taty aoriana, toy ny “Tetsuo: the Iron Man” sy “Ringu”.
Ireo fanadihadiana fohy hafa ao amin'ny Youtube dia ahitàna ihany koa ny “Ny Nanovàn'ny Tanandehibe Ny Fomba Fijerintsika ny Hoavy”, “Ny Namoronana ny Sarimihetsika (1888 hatramin'ny 1914)” sy ny “Milaza Inona Amintsika Momba ny Tahotra ireo sarimihetsika misy tànana baikon'ny Demony ?”
Raha te-hahafantatra misimisy kokoa ianao, toerana iray tsara koa hanombohana azy ny “Ka Te-Hamaky Tantara Japoney Mampivarahontsana ianao izany: Eto Anombohana Azy” notontosain'i Feliza Casano ho an'ny Unbound Worlds, tranonkala iray mifantoka amin'ny literatiora fitantarana ny tantara foronina sy nofinofy.